Democracy Menu : मल्टिपार्टि क्वाँटि, अग्रगामी सेकुवा र जनक्रान्ति छोयला
Aakar August 30, 2010
डेमोक्रेसी मेनु सुन्दा झट्ट अचम्म लाग्न सक्छ तर एउटा रेष्टुरेन्ट मा भने डेमोक्रेसी मेनु राखिएको रहेछ । डेमोक्रेसी मेनु मा, लोकतन्त्र खाजा, मल्टिपाट्रि क्वाँटि, अग्रगामी सेकुवा, जनक्रान्ति छोयला आदि राखिएकोहेछ । अस्ति शनिवार को दिन बबरमहल स्थित फल्चा मा ‘काठमाडौँ बारक्याम्प २०१०’ को आयोजना गरिएको थियो, त्यही फल्चा मा नै थरिथरिका मेनुहरु रहेछन् । डेमोक्रेसी मेनु मात्र कहाँ हुनु, पिस (शान्ति) मेनु पनि टाँगिएको रहेछ ।
राजनैतिक शब्द, या भनौँ नेपाल को राजनिति मा प्रचलित शब्दहरु लिएर फल्चामा खाना को मेनु बनाइएको रहेछ । देशमा नेताहरु ले कुर्सी को लुछाचुँडि गरिरहेको बेला, मल्टिपार्टि क्वाँटि, अग्रगामी सेकुवा र जनक्रान्ति छोयला आदि रहेको डेमोक्रेसी मेनु मा तपाई पनि रमाउनुहोस् ! मेनु मात्रै हेरेर त के रमाइलो लाग्ला र खै ? अब प्रजातन्त्र र शान्ति मेनु देखेपछि उतै गएर टन्न बजाउँदा झनै रमाइलो हुँदो हो !!! :D
कलमबीर_घोताने August 30, 2010 at 7:17 PM
खै किन हो मलाई त यो मेनुमा खानाको नाम देख्दा नाक खुम्च्याउँदैछु। पक्कै पनि यो नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर होला। तर फेरी यो त खाना मात्रै हो, नेताहरुले हैन, हामी जस्तै जनताले पकाएको भनेर सोच्दै पनि छु। हुन पनि नाममा के छ र, खानु पाए त खाने नि भनेर पनि सोच्दै छु। बरु स्वाद थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो?
मनु August 31, 2010 at 2:38 AM
कस्तो रमाइलो लेख। आकार जी लाइ धन्यवाद नदिइ रहन सक्दै सकिन । पुरानो दिनको याद आयो करिव २ वर्ष जति भयो क्यारे फाल्चा छिर्न नपाइएको पनि तर साचै मै त्यहा पुगे जस्तै लाग्यो ।
Unknown August 31, 2010 at 1:56 PM
यो र यो जस्तै थुप्रै विषयवस्तुहरु देख्छु म आजभोली जो देख्दा ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर आफैलाई ट्युरी गरेजस्तो महसुस हुन्छ । यो पनि त्यस्तै लाग्यो ।
aashish September 1, 2010 at 8:15 AM
sACHAI NAI mAJJAKO mENU rAHE6. HEHE
दीपक जडित November 12, 2010 at 4:01 AM
मनु November 12, 2010 at 4:01 AM